Maadheelee jijjiirraa irraa dhorkuu
LibreOffice Calc keessatti wardiilee fi galmee akkuma jirutti dhorkuu dandeessa.Akka man'eeleen jijjiirraa tasaa irraa dhorkaman,akka foormulaawwan Calc irraa argamauu danda'an,akka man'eeleen mul'atan yookiin akka man'eeleen maxxansamuu danda'an filachuu dandeessa.
Dhorki karaa iggitaatii kennamuu danda'a,garuu ta'uu hin qabu.Yoo iggita kennitee jiraatte,dhorki erga iggitni sirrii galchamee booda qofa baduu danda'a.
Akka dhorki man'ee kan man'eelee amala dhorkameera qabanii kan raawwatu yeroo gabatee guutuu dhorkite qofa akka ta'e hubadhu.Haala durtii keessatti,man'een hunduu amala dhorkameera qaba.Kanaafuu filannoodhaan man'ee bakka fayyadamaan jijjiirraa godhuuf amala sana balleessuu qabda.Achumaan gabatee guutuu dhorkitee galmee olkeessa.
Amalootni dhorkaa kunneen meeshaa gochaa tasaa ittiin ittisnu dha.Amalootni kunneen dhorka amansiisaaf kan yaadaman miti.Fakkeenyaaf,wardii gara dhangii faayilii biraatti alerguudhaan,fayyadamaan amaloota dhorkaa irra kutuu danda'a.Dhorka amansiisaa tokko qofatu jira:iggita yeroo olkaa'uu galmee banaa raawwattu.Faayiliin iggitaan olkaa'ame kana bamanuu danda'u iggituma sana qofaani dha.
Maadheelee kan dirqaalaalee dhorka maadhee ifteessuufii barbaadde filadhu.
Dhangii - Man'eelee filadhuutii caancala Dhorka Man'ee cuqaasi.
Jijjiirraa qabiyyeewwanii fi dhangii man'ee dhorkuuf Dhorkameera filadhu.
Foormulaa jijjiirraa irraa dhoksuu fi dhorkuuf Foormulaa dhoksi filadhu.
Man'eelee dhorkaman galmee maxxansame keessaa dhoksuuf Yeroo maxxansaa dhoksifiladhu.
Dirqaalaalee dhorkaa raawwadhu.
Yoo iggita kee irraanfatte,dhorka kaka'uumsala gochuu hin dandeessu.Yoo man'ee jijjiirraa tasaa irraa qofa dhrkuu barbaadde,dhorka wardii qindeessi, iggita garuu hin galchin.
maadheelee dhorkuu dhiisuu
Qabeentoota keessaa eeguu LibreOffice
Title is: Maadheelee jijjiirraa irraa dhorkuu